वर्दिया निकुञ्ज पर्यटनको गन्तब्य – केबी मसाल
वर्दिया निकुञ्ज पर्यटनको गन्तब्य
August 11, 2017 September 18, 2017 KB Mashal0Comment
नयाँ मुलुक, बुडान जस्ता नामले पनि चिनिने प्रदेश नं.५को बर्दिया जिल्ला राष्ट्रिय निकुञ्जले गर्दा पर्यटनको गन्तब्य बन्दै गएको छ । नेपालमा आउने वाह्य पर्यटकहरु समेत आजभोली वर्दिया निकुञ्जमा आएर जनावरहरुको अवलोकन र सिमसार क्षेत्रको अध्यन गर्दछन । नेपालमा पर्यटकहरु के का लागी भ्रमणमा आउछन त ? भ्रमणका उद्देश्य फरक हुन सक्छन् । तीमध्ये प्रमुख उद्देश्य भनेको मनोरञ्जन र जैविक विविधतामा रमाउने हो ।
नेपाल आउने पर्यटकमध्ये धेरै प्राकृतिक दृश्य अवलोकन र मनोरञ्जनका लागि आउने गर्दछन । यसबाट के थाहा हुन्छ भने भ्रमणको एउटा पक्षभित्र जैविक विविधता पर्दछ । जैविक विविधताले प्रकृतिलाई सुन्दर बनाएको छ । प्राकृतिक स्वरुपले सबै भूगोललाई मिलाएको छ । यीनै कारणले नेपाल जैविक विविधताको पर्यटकको गन्तव्य भएको छ । नेपालका उच्चपहाडी भेगमा पाइने जनावर र वनस्पति, पहाड र तराईका भन्दा फरक छ । जस्तै हिमालमा डाँफे चरा पाइन्छ भने तराईमा गरुड वा हाँडीफोर र मयुर पाइन्छ । जैविक विविधताले कारणले गर्दा वर्दियाको निकुञ्ज पर्यटकीय गन्तव्य भएको छ ।
वाइल्डलाइफमा रुची राख्ने पर्यटकका लागि बर्दिया विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्य मानिन्छ । यहाँ विश्वमै दुर्लभ मानिएको पाटे बाघ समेत पाइन्छन् । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न आएका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक दिनहुँ पाटेबाघ देख्न पाएपछि रमाउने गर्दछन । निकुञ्जमा बाघको बासस्थान राम्रो भएकाले गर्मी बढन थालेपछि पानीमा बाघ पौडीन आउनाले निकुञ्जभित्रै रहेको कर्णाली नदीको भँगालो किनारमा रहेको तिनकुनेमा दिनहुँ पाटेबाघ देख्न पाउदा पर्यटकहरु रमाउछन । पर्यटकको सिजन सुरु हुने बेलामै बर्दिया निकुञ्जमा दिनहुँ पाटेबाघ देखिएपछि निकुञ्ज अवलोकन गर्न आउने पर्यटकको सख्या पनि बढने गर्दछ । जुन कारणले निकुञ्ज आसपास ठाकुरद्वाराका होटल व्यवसायी पनि खुसी हुन्छन् ।
नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जहरु प्राकृतिक वातावरण, वन्यजन्तु, पशुपछी, वनस्पति र भू–स्वरुपलाई संरक्षण गर्न छुटयाइएको भू–भाग राष्ट्रिय निकुञ्ज हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण तथा संरक्षण क्षेत्रले नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिव १९.७ प्रतिशत भाग ओगटेको छ । अहिले सम्म नेपालमा खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज ,चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज, शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज,मकालु–बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज, लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज र शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज समेत १० स्थानमा निकुञ्ज रहेका छन भने पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष, कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, शुक्लाफाँट वन्यजन्तु आरक्ष, ढोरपाटन शिकार आरक्ष र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र समेत ५ स्थानमा आरक्षण रहेका छन ।
मुलुक भित्र धेरै निकुञ्ज भए पनि नेपालआउने पर्यटकहरु मध्य धेरै वर्दियामा पुग्ने गर्दछन । बर्दियाको निकुञ्ज पर्यावरण जोगाउने र पाटे बाघजस्ता लोपोन्मुख प्रजातिको जनावर संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो । सुरुमा यस आरक्षणलाई कर्णाली बन्यजन्तु आरक्षणको रुपमा सानो क्षेत्रलाई मात्र लिइएको थियो । पछि आरक्षणलाई बबैखोला सम्म बिस्तार गरी बाघ, हात्ती, गैडा जस्ता जंगली जनावर पर्यटकहरुलाई सहज रुपमा देख्न पाउने ब्यवस्था निकुञ्जले मिलाएको छ । निकुञ्ज वरिपरिको ३ सय वर्ग कि.मि.जमिन रहेको छ । विभिन्न प्रकारका जीव र वनस्पतिहरुले धनी छ वर्दिया निकुञ्ज । यहा विभिन्न जीवका प्रजातिहरु सजिलै भेटिन्छन् जस्तै पाटे बाघ, एक सिङगे गैंडा,जंगली हात्ती, बाह्रसिङगे, घडियाल गोही, डल्फिन आदि । यहा २ सय भन्दा बढी प्रजातिका चराहरु र विभिन्न प्रकारका छेपारो, सर्प, माछा आदि पाइन्छ । हात्ती चढने, चराचुरुङगी अवलोकन गर्ने, जंगल सफारीको आनन्द लिन पर्यटकहरु रुचाउछन ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा प्रत्येक बर्ष पर्यटकको सख्या बढदै गएको छ । निकुञ्जमा पाईने र्दुलभ बन्यजन्तु लगायत यातायात तथा होटल वासको सुविधा सुलभ भएसँगै निकुञ्जमा पर्यटकहरु बढेका हुन् । ठाकुरद्वारा देखि काठमांडौ सम्म सुविधा सम्पन्न वस सेवा सञ्चालन र पर्यटकीय होटलहरुले सेवा विस्तार गरेका कारण पनि पर्यटकको आवागमनमा बृद्धि भएको हो । हिउँदको समयमा निकुञ्जमा पर्यटकको संख्या बढी हुन्छ । आन्तरिक पर्यटकको चाप बढदै गएपछि होटल व्यवसायीको कारोवार बढेको छ । ठाकुरद्वाराका होटलमा भारत, बेलायत, फ्रान्स, अमेरिकालगायत मुलुकबाट पर्यटक बढी आउने गरेका छन् । तराईकै सबैभन्दा ठूलो संरक्षित क्षेत्रको रुपमा स्थापित वर्दिया निकुञ्जको प्राकृतिक सुन्दरता, बबई उपत्यकाको मनमोहक दृश्य, कर्णाली नदीमा ¥याफ्टिङ गर्नुका साथै नजिकैबाट डल्फिन नियाल्न सकिने भएकोले पर्यटक आकर्षित हुने गरेका छन ।
नेपाल पर्यटनका लागि अनेकौं सम्भावना भएको देश हो । भौगोलिक हिसाबले होस वा जातीय विविधताको हिसाबले पर्यटकका लागि नेपाल आकर्षणको गन्तब्य बन्दै गएको छ । अर्को तर्फ भाषिक विविधताको हिसाबले र सांस्कृतिक विविधिताको हिसाबले पनि विदेशी पर्यटकका लागि नेपालको छुट्टै पहिचान बनेको छ । त्यतिमात्र होइन, जैविक विविधताको हिसाबले पनि नेपालमा पर्यटकहरु आकर्षित हुदै आएका छन । पछिलो समयमा शिकार पर्यटन, चरा अवलोकन पर्यटन, वन्यजन्तु अवलोकन पर्यटन, वन्यजन्तु अध्ययन अनुसन्धान जस्ता पर्यटनप्रति पनि पर्यटकहरुले रुचि राख्न थालेका छन ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा मुख्य गरी बाघ हेर्नका लागि पर्यटक जाने गरेका छन् । निकुञ्जमा सिजनमा सजिलै बाघ देख्न पाइने भएकाले पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । आहारा प्रजातिको जनावर वृद्धि भई बाघको संख्यामा वृद्धि हुनुले पनि पर्यटक बढेको निकुञ्जको भनाइ रहेको छ । बर्दियामा निकुञ्जमा पुग्ने पर्यटकको मुख्य चाहना बाघ हेर्ने नै हुन्छ । त्यसपछिको चाहना भने गैँडा अवलोकन गर्नुलगायत हात्ती सफारी, जंगल सफारी गरी निकुञ्जका विविध जनावरहरुको अवलोकन गर्न पर्यटकहरु रुचाउछन । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य विशेषता भनेको बाघ, हात्ती, गैँडा एकसाथ हेर्न पाउनु पनि हो । निकुञ्जमा यतिखेर २९ वटा डमरुसहित ८५ वटा बाघ छन् ।
वेलायतका राजकुमार ह्यारीले निकुञ्ज भ्रमण गरेयता विदेशमा पनि बर्दिया निकुञ्जले विशेष चर्चा पाएको छ । बर्दिया निकुञ्ज तराईकै सबैभन्दा ठूलो संरक्षित क्षेत्र पनि हो । हात्ती सफारी, जंगल सफारी, कर्णाली नदिमा र्याफटिङ्ग, बबई नदीका गोही र निकुञ्जको प्राकृतिक सुन्दरताले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरेको पाईएको छ । अर्को तर्फ निकुञ्जमा बाघ, गैँडा, हात्तीलगायतका वन्यजन्तुको संख्या बढदै गएपछि पर्यटकहरुको सख्या पनि बढन थालेको छ । आर्थिक वर्ष ०७३ र ७४ मा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा १७ हजार नौ सय ५९ पर्यटक भित्रिएको निकुञ्जको तथ्यांक छ । यस अवधिमा ११ हजार ६ सय नौ आन्तरिक, पाँच हजार आठ सय २७ विदेशी र पाँच सय २३ सार्क मुलुकका पर्यटकले निकुञ्ज अवलोकन भ्रमण गरेका छन । निकुञ्जमा पर्यटक बढेसँगै राजस्वमा पनि वृद्धि भएको छ ।
बर्दिया जिल्लामा पर्यटकहरुलाई भ्रमण गर्ने धेरै ठाउहरु छन । कर्णालीको भँगालो गेरुवा नदीको भेरीको पुल मुलुककै सबैभन्दा लामो हो । राजापुर क्षेत्रको प्रवेशद्वारका रुपमा रहेको कोठियाघाटको पक्की पुल १ हजार १५ मिटर लामो रहेको छ । सदरमुकाम गुलरियाबाट २५ किलोमिटर पश्चिममा रहेको कोठियाघाटको पुल हेर्न मात्र धेरै पर्यटकहरु पुग्ने गर्दछन । बर्दियामा बदैया ताल, सत्खलुवा ताल, कृष्णसागर ताल, भग्रैया ताल, अनौहवा ताल, लक्ष्मण ताल र दानुवा ताल समेत भ्रमणको लागी रमणिय छन । वहैया ताल बर्दिया जिल्लाको सवै भन्दा ठूलो र ऐतिहासिक ताल हो । यो ताल बर्दिया जिल्लाको बढैयाताल गाउँपालिकामा पर्दछ । यो ऐतिहासिक र प्राकृतिक सिमसार ताल हो । यो तालसंग स्थानिय आदिवासी थारुहरुको ऐतिहासिक, सस्कृतिक, समाजिक, आथिर्क तथा जैविक महत्व जोडिएको छ । बदैया ताल गुलरियाबाट २० कि.मि पूर्वमा पर्दछ । तालको पश्चिम उत्तरमा थारुहरुको वहैया गाउ रहेको छ । जुन तालमा आजभोली धेरै पर्यटकहरु पुग्ने गरेका छन ।
वर्दिया भ्रमण गर्न जाने पर्यटकहरु कर्णाली पुल पुगेनन् भने भ्रमणनै अधुरो मानिन्छ । यो पुल निर्माणमा बिचमा ठूलो खम्बा र त्यसमा स्टीलका तारहरु बाधेर ट्रसलाई अडयाईएको छ । यो पुल ५०० मिटर लामो र १० मिटर चौडा छ । यसको निर्माण जापानको कावासाकी हेवी इन्डस्टीजले गरेको हो । नेपालको मात्र नभएर एशियाकै लागि नयाँ डिजाइन मानिने यो पुल हेर्नको लागी नेपालका धेरै जिल्लाका मानिसहरु पुग्ने गर्दछन । कैलाली र बर्दिया जिल्लाको सिमामा रहेको कर्णाली नदीको पुल हेर्नकै लागी दैनिक सयौं पर्यटकहरु पुग्ने गर्दछन । कर्णाली पुल भएको स्थान चिसापानी बाट करिव ८ कि.मि. उत्तरमा कुइने भन्ने स्थान पर्दछ । कुइनेमा भेरी र कर्णाली नदी मिसिन्छ । त्यहा बाट बग्दै आएको कर्णालीनदी पुलको भाग सकिना साथ पुन दुई भागमा बिभाजन भएर बग्दछ । स्थानीय बोलीचालीमा यसरी छुट्टीएर बनेको पानीको भागलाई पश्चिम तिरको पानी कर्णाली र पूर्व तिरको पानीलाई भेरी भन्ने गरिन्छ ।
वर्दिया भ्रमण गर्न जाने पर्यटकहरुलाई आजभोली खान बस्न कुनै समस्या छैन । डल्ला होमस्टे, सतखला होमस्टे र जनकनगर होमस्टे रहेको छन । निकुञ्ज नजिकै डल्ला गाउँमा सन्चालनमा आएको होमस्टेमा पर्यटकहरुको लागी बेलुका सामुदायिक भवनमा झुमरा, लठ्ठी, मजिरा र छोकरा नृत्य समेत देखाइन्छ । होम–स्टेमा इच्छा अनुसार थारु परिकार दालभात, तरकारी, अचारदेखि थारु खाना घोंगी, चिँचर, माछा, लोकल कुखुरा, मुसाको पकुवा, महुवाको रक्सी आदिले त्यहा पुग्ने पर्यटकहरुलाई स्वागत गर्ने गरिन्छ । यो बाहेक पाताभारको जनकनगरमा पनि होमस्टे संचालन भएको छ । जनकनगरमा पर्यटकलाई सुबिधा दिन १० घरमा होमस्टे संचालन गरिएको छ । पर्यटकका लागि जंगली जनावरको अवलोकनका साथसाथै कर्णाली नदिमा ¥याफटिङ्ग समेतको सुविधा होमस्टेमा बास बस्ने पर्यटकहरुलाई दिने गरिन्छ । चुरे पहाडको नजिक रहेको जनकनगर होमस्टे वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि अत्यन्त रमणिय छ ।
यो बाहेक वर्दियामा सत्खलुवा ताल पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तर चुरेको काखमा छ । दुर्लभ रातो कमलको फूल हेर्न स्थानीय पर्यटक पुग्ने गर्छन् । जैविक मार्ग होमस्टे संचालन पछी खैरेनी गाउँमा अहिले १० वटा घरमा होमस्टे संचालन गरेका छन । ताल र पशुपंक्षी हेर्न आउने पर्यटकलाई थारु बाहुल्य क्षेत्र भएपनि सबै जातजातिको आ–आफ्नो मौलिक भेषभुषामा सजिएर पाहुनालाई सत्कार गर्ने र मौलिक थारु नृत्यु, खैजडीमा भजनदेखि देउडा सम्ममा गित गाएर मनोरञ्जन दिने गर्दछन । बर्दियाको चिनारी दिने बढैया ताल, सत्खलुवा ताल, भगर ताल भ्रमणमा आउनेहरुले छुटाउनै नहुने स्थान हो ।
वर्दिया पश्चिम क्षेत्रको अन्न भण्डारको रुपमा पनि चिनिन्छ । भौगोलिक हिसावले दुई भागमा विभाजन भएको वर्दिया राजापुर क्षेत्र भेरी र कर्णाली नदीले टापु बनाइ दिएको छ । पहिले आदिवासी थारुहरुको बाहुल्यता रहेको वर्दियामा पछिल्लो समय दाङ जिल्लाबाट बसाइ–सराइ गर्ने थारुजातीहरुको सख्या पनि उल्लेखनिय रहन गएको छ । बर्दिया जिल्लामा अहिले नेपालका ७५ जिल्लाकै मानिसहरुको बसोवास छ । श्री ३ जंगबहादुर राणाले ईष्ट इण्डिया कम्पनिलाई सहयोग गरेवापत सुगौली सन्धिबाट गुमेको भु–भाग मध्य पुरस्कार स्वरुप वि.स. १९१७ मा बाके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता आएकोले बर्दियालाई नया मुलुक पनि भन्ने गरिन्छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि बर्दिया ६ वटा नगरपालिका र २ गाउपालिकामा बिभाजन भएको छ । गुलरिया, मधुवन, राजापुर, ठाकुरबाबा, बासगढी र बारबर्दिया नगरपालिका भयो भने बढैयाताल र गेरुवा गाउँपालिका बनेका छन ।
वर्दियाको ठाकुरद्वार जानको लागी कोहलपुर बाट ६० कि.मी पश्चिम आम्बासा अर्थात अर्मीनी पुग्ने र त्यहाबाट १४ कि.मी दक्षीणको यात्रामा वर्दिया निकुञ्जको गेट पुगिन्छ । काठमाडौँबाट ठाकुरद्वारा जानेको लागी बसमा १५ घण्टा यात्रा गर्नु पर्दछ । नेपालगञ्ज–ठाकुरद्वारा ९० किलोमिटर पर्दछ । काठमाडौंदेखि नेपालगन्जसम्म हवाईसेवा पनि छ । वर्दिया भ्रमणको लागी पुग्ने र फर्कने समय बाहेक कम्तीमा तीनदिन समय निकाल्दा राम्रो हुन्छ । यातायात खर्च बाहेक सामान्यतया खाना बस्न दैनिक १ हजार ५ सय रुपया भए पुग्दछ ।
मितिः –२०७४ साउन २५ गते दाङ
← नेवारको मौलिक पर्व गाईजात्रा
श्रीकृष्णको उपदेश नै श्रीमदभगवत गीता →